SEO aghụghọ Site na Semalt - Ndekọ azụ mpaghara na otu esi achọta ha
Ndabere backlinks dị na mpaghara na-eme otu nzube bụ isi: iji wuo mkpa na otu ebe. Azụ azụ dị ike dị na mpaghara kwesịrị ịgbaso ntinye ndị a: redirect visitors to the website and speak to the needs or preferences of marketplace.
Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Ahịa nke Semalt , Jason Adler, na-akọwa ebe a niile ịchọrọ ịmara njikọta mpaghara mpaghara
Ụlọ ọrụ ndị na-emetụta azụmahịa n'ahịa enweghị ikike dị ukwuu na search engine s. Ha nwekwara ike ịbụ obere ụlọ ahịa dị ka gị onwe gị. Ma ebe ọ bụ na ha nwere mmetụta dị ukwuu, inwe njikọ site na ha nwere ike ịba uru karị.
Ihe kpatara ndị nwe obere na-ele anya na backlinks mpaghara bụ n'ihi adịghị ike ha nwere - emilie bajard. Ihe ka ukwuu, ọ bụ enweghị obi ụtọ ọdịnaya nke ndị na-ebipụta nnukwu akwụkwọ na-achọ, n'ihi nkwụsị nke mmefu ego. Dị ka onye ọchụnta ego, ọ dị mma iru maka kpakpando, mana ọ dịkwa mkpa ịghọta ọrụ nhazi. O nweghị uru ịme ahịa n'otu mpaghara ka ị na-achọ ịzụ ahịa site n'aka onye ọzọ.
Malite na ederede
Ụfọdụ n'ime ọrụ ndị ga-enyere azụmahịa aka ịmalite azụ azụ azụ obodo bụ ịmepụta ihe ederede, ịchọ ndekọ akwụkwọ n'ozuzu, na ijide n'aka na ozi azụmahịa niile dị ugbu a ma ziri ezi. Ịmepụta oku na-enyere onye nwe ya aka itinye NAP (Aha, Adreesị, Nọmba ekwentị), maọbụ njikọ ya na saịtị ọdịda na saịtị ha, na ebe nrụọrụ weebụ mara mma nke na-enweghị spam. Ọ na-eme ka ohere nke search engines na-edepụta ya n'oge ọchụchọ nyocha ma ọ bụrụ na asọmpi ahụ na njụ-ajụjụ ahụ dị ala. Nweta aha aha ahụ na ọnụ ọgụgụ na-enweghị njedebe nke isi mmalite. Obodo nke Yext na Moz nwere ike inye aka na ụlọ ụlọ edemede.
Ohere ohere Lie Anywhere
E nwere azọrọ na ụlọ njikọ ụlọ bụ ihe na-ekwekọghị n'okike, nke na-abaghị uru, ma ọ bụ na-agaghị ekwe omume na ya. ọ dị mkpa ka ịmepụta ihe karịa ndị nkwusa buru ibu Ohere ịmepụta njikọ na ebe nrụọrụ weebụ dị nnọọ ntakịrị ebe ọ bụ na isiokwu ndị dị na mpaghara anaghị enwe oke olu. Ọzọkwa, ebe ndị a na-eche na enweghị ikikere. Jiri akwụkwọ akụkọ mpaghara, ndị na-ede blọgụ mpaghara, ihe mmemme na mpaghara ahụ, azụmahịa ndị ọzọ, ma ọ bụ ọrụ ebere mpaghara nke na-eme nkwado.
Ohere nwere ohere sara mbara, mana tupu ịmepụta ohere ọhụrụ, ghọtara ike ya. Mgbasaozi e setịpụrụ na-ekpebi otu esi arụ ọrụ mgbasa ozi azụmahịa. Ihe mgbochi ndị dị ugbu a na-eme ka ịmepụta ihe na ịdị irè nke ohere ịchọta.
Mepee Ngwá Ọrụ Njikọ Ka Ịmalite Ịchọta Ihe Ọ Ga - eme
Ngwaọrụ ọ bụla kwesịrị ịrụ ọrụ maka ebe nrụọrụ weebụ. Ka o sina dị, tụlee nkwụsị ahịa, na ihe asọmpi. Nyocha na isi okwu mpaghara ma hụ otú azụmahịa ndị ọzọ si dị na ha na ndị nwere ogo kacha elu.
Mee ndepụta nke ụlọ ọrụ ndị a ma hụ ihe azụlinks ha nwetaworo n'oge gara aga. Tụlee iji hụ njikọ nke njikọ dị ka ha bụ asọmpi ugbu a n'ahịa. Mee ihe atụ nke backlink profile nke saịtị ahụ, ịhụ ihe ọ na-efu. Wepu ihe ọ bụla ejikọtara ya na asọmpi ma soro ndị ahụ na saịtị ha enweghị. Ebe ahụ dị n'ọnọdụ ka mma iji merie ugbu a ọ bụrụ na ọ na - eme nke a n'enweghị ihe ọ bụla.
Ịchọta ohere ndị ọzọ
Ọ bụrụ na asọmpi ahụ abata, ihe kachasị dị mma na ihe a na-eme bụ iji nweta njikọ ndị ọzọ. Nyochaa ulo oru ndi ozo ndi ozo n'adighi ulo oru ugbua ka ha mara otua ha si ewu ha. Enwere ike inwe ụfọdụ mkpụrụ osisi ndị dị ala nwere ike ịkwado obere azụmahịa n'oge gara aga. Otu usoro bụ ịchọta azụmahịa dị elu site na ọrụ ndị dị ka Yelp ma tinye ha na ngwá ọrụ ntụgharị backlink. Ha nwere ike ghara inye gị uru ọ bụla, mana ha nwere ọtụtụ ozi banyere usoro nkwado dị iche iche.